भारतमा कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था : नेपाल उच्च जोखिममा, तयारी खोई? – Health Post Nepal
२०७७ चैत २६ गते १०:३६
भारतमा कोरोना संक्रमणले आक्रामक रुप लिएको छ। दिनानुदिन तीव्र गतिमा फैलिइरहेको संक्रमणको आंकडाले रेकर्ड कायम गर्दै गएको छ।
गत २४ घण्टामा मात्रै भारतमा थप १ लाख २६ हजार ३ सय १५ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या भारतमा हालसम्म २४ घण्टाभित्र देखिएका संक्रमितको संख्याको सबैभन्दा बढी हो।
यसअघि गत मंगलबार १ लाख १५ हजारमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबारमात्रै ६ सय ८४ संक्रमितले ज्यानसमेत गुमाएका छन्।
योसँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या १ करोड २६ लाख नाघेको छ। एक्टिभ केशको संख्या ९ लाख माथि छ। कोरोनाले भारतको महाराष्ट्र सबैभन्दा बढी पीडित बनेको छ। महाराष्ट्रमा बुधबारमात्रै ६० हजार बढी संक्रमित थपिएका छन्।
यसैबीच, कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज साँझ सम्पूर्ण राज्यका मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतसँग छलफल गर्दैछन्।
भारतमा संक्रमण तीव्र भएपछि नेपालमा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ। भारतबाट खुलेआम मानिसहरु नेपाल भित्रिइरहेका छन्। सीमामा उचित चेकजाँचको प्रबन्ध छैन।
जसले नेपालमा पनि दिनानुदिन संक्रमण बढ्दै गइरहेको देखाएको छ। भारतबाट आउनेहरुले नेपालमा नयाँ भेरियन्टको कोरोना भित्र्याइसकेका छन्।
नेपालमा पनि कोराना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। बुधबारमात्रै तीन महिनायता कै उच्च संख्यामा संक्रमित थपिएका छन्। बुधबार ३ सय ३९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २ हजार २ सय १ छ।
नेपालमा कोरोनाको नयाँ भाइरस फैलिँदो क्रममा रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पनि जनाइसकेको छ
। महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले केही दिनयता कोरोनाको संक्रमण संख्या बढ्नुमा नयाँ भेरियन्ट जिम्मेवार रहेको संकेत गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा डा. पौडेलले ‘युके भेरियन्ट’ नेपालमा देखिसकेको पुष्टि गरे।
‘नमुना परीक्षणमा युके भेरिन्यटसँग मिल्दोजुल्दो भाइरस देखिएका छन्। यसले ६ हप्ताभित्र संक्रमण संख्या बढ्ने निश्चित छ,’ डा. पौडेलले भने।
हाल विश्वभर तीन प्रकारका कोरोनाका प्रकार चर्चामा छन्। बेलायत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा देखिएका भाइरस बढी संक्रामक रहेको पाइएको छ। तिनै भेरिन्यट भारतमा फैलिएको हुँदा नेपालमा पनि थप जोखिम रहेको डा. पौडेलले बताए।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेस्टुरेन्टहरू राति ९ बजेपछि बन्द गर्न पनि आग्रह गरेको छ। तर, रात्रिकालिन व्यवसायमात्र बन्द गरेर संक्रमण रोक्न असम्भव छ।
यसका लागि समयमै नेपाल सरकारले आवश्यक सावधानीसहितका उपाय ल्याउन आवश्यक छ, अन्यथा भारतमाजस्तै नेपालमा पनि संक्रमणले विकराल रुप नलेला भन्न सकिन्न।
One thought on “भारतमा कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था : नेपाल उच्च जोखिममा, तयारी खोई?”
सरकार त चिर निन्द्रामा छ जस्तो लाग्छ ! गत बर्ष कोरोना नै नदेखिएको अवस्था मा लक डाउन थोपर्ने काम भयो, हाल दिन प्रती दिन कोरोनाका बिरामी बढिरहेका छन तर सरकार निराे भएको देखिन्छ !!